Tijaabada COVID-guriga-Guriga: 5-ta Su'aalood ee ugu Sarreysa ayaa laga Jawaabay - CHPW's website blog ee rasmiga ah CHPW's blog blog | Awooda bulshada Barta rasmiga ah ee CHPW
Ku saabsan CHPW
Tijaabada COVID-guriga-guriga: 5-ta Su'aalood ee ugu sarreeya ayaa laga jawaabay
Caafimaadka & Fayaqabka | Febraayo 7th, 2022
Waqtiga Akhrinta: 4 Daqiiqad / s
Caafimaadka & Fayaqabka
La dhajiyay Febraayo 7th, 2022 - Waqtiga Akhriska: 4 Daqiiqad / s
Maxaan ka ogaanaa imtixaanada guriga?
Waxaan la kulannay Dr. LuAnn Lawton Chen, oo ah Agaasimaha Sare ee Caafimaadka Qorshaha Caafimaadka Bulshada ee Washington (CHPW), si aad wax badan uga barato imtixaanada guriga-iyo waxa la samaynayo haddii baaritaankaagu togan yahay.
Tijaabadu waa qalab muhiim ah oo ka caawinaya xakamaynta fiditaanka COVID-19. Xirmooyinka baaritaanka guriga waxay noqdeen doorasho caan ah, laakiin, badi, qalabkani waa kuwo cusub oo aan la aqoon. Taasi waa sababta aan halkan u joogno si aan uga jawaabno qaar ka mid ah xubnaha bulshadayada su'aalaha ugu sarreeya.
– Dr. LuAnn Lawton Chen
Marka hore, waa maxay baaritaanka COVID-19 ee guriga?
Qalabka baarista COVID-19 ee guriga waxaa ku jira imtixaano aad samayn karto oo aad naftaada u fasiri karto, adigoon tagin rugta caafimaadka ama goobta baaritaanka.
Hadda waxaa jira laba nooc oo imtixaanno ah oo laga heli karo Gobolka Washington:
antigen Tijaabada, oo sidoo kale loo yaqaan "baaritaan degdeg ah" - waxay ogaataa jajabyada borotiinka ee gaarka ah ee fayraska COVID-19 qiyaastii 15 daqiiqo
PCR (Reverse transcription-polymerase chain reaction) tijaabada - waxa lagu ogaadaa RNA (walxaha hiddesideyaasha) ee u gaarka ah fayraska COVID-19, iyadoo natiijooyin la heli karo maalmo gudahood.
Tijaabada PCR waa sax, laakiin waxay u baahan tahay inaad ku dirto baaritaankaaga shaybaadhka waxayna qaadanaysaa qiyaastii 2-3 maalmood si loo habeeyo.
Labada imtixaanba waxay la socdaan tilmaamo faahfaahsan oo ku saabsan sida loo ururiyo shaybaarrada lagama maarmaanka ah-sida caadiga ah iyada oo suuf laga galo marinkaaga sanka-iyo sida saxda ah ee baaritaanka loo sameeyo.
Intee in le'eg ayay yihiin qalabka baadhista guriga?
Xirmooyinka baarista guriga ayaa aad ugu saxsan haddi aad nidaamkaaga ku jirto xaddi badan oo fayras ah. Xirmooyinkani inta badan waa taban ka hor inta aan calaamadaha la muujin ama haddii ay weli tahay bilowga habka fayraska. Tijaabo ku celis ah ayaa lagula talinayaa haddii astaamuhu soo baxaan ama haddii aad ogtahay inay suurtogal tahay in lagugu soo bandhigay.
Intaa waxaa dheer, baaritaanada PCR waxay u badan tahay inay muujiyaan xaqiiqooyin been ah marka loo eego tijaabooyinka antigen-ka.
Sideen ku heli karaa baaritaanka COVID-19 guriga dhexdiisa?
Waxaa jira dhowr ikhtiyaar oo lagu helo baaritaanka COVID-19 ee guriga, oo ay ku jiraan:
Ka hubi bixiyaha caymiskaaga ikhtiyaarrada shabakadda iyo sida lagugu soo celin karo iibka. Caymiska caafimaadka gaarka ah wuxuu dabooli doonaa ilaa 8 baaritaanada antigen-ka ee guriga bishii.
Ka dalbo covidtests.gov gaarsiinta Adeegga Boostada Mareykanka 4 imtixaan qoyskiiba
Fiiri bogga Waaxda Caafimaadka ee WA ilo dheeraad ah
Iibka farmashiyaha, dukaamada daawada, ama onlayn. Ka digtoonow inaad hubiso inaad ka dalbanayso ilo online ah oo sumcad leh iyo ka digtoonow qiimaha sarreeya.
Xarumo badan oo caafimaadka bulshada ah iyo ururo kale oo maxali ah ayaa sidoo kale gacan ka geysanaya qaybinta xirmooyinka baaritaanka
Ma xubin ka tahay? CHPW Apple Health (Medicaid), CHPW Medicare Advantage, iyo CHNW Cascade Select xubnuhu waxay heli karaan ilaa 8 imtixaan bishiiba iyagoo $0 iska bixinaya farmashiyeyaasha shabakada dhexdeeda. Shaqsi ahaan, dalbashada boostada onlaynka ah, iyo ikhtiyaarka lacag celinta ayaa diyaar ah - Faahfaahinta ka eeg boggayaga COVID-19.
Goorma ayaan isticmaalaa baaritaanka guriga?
Haddii aad tahay oo muujinaysa Calaamadaha covid19, waa in aad isla markiiba imtixaan qaaddaa. Haddii aad leedahay calaamado oo baaritaanka hore uu u muuqdo mid xun, waxaa suurtagal ah in qalad uu dhacay, waana inaad ku celisaa baaritaanka dhowr maalmood ka dib. Calaamadaha COVID-19 waxaa ka mid noqon kara qandho, cune xanuun, isha casaanka ah, sanka duufsan, murqo xanuun, ur dhib ah ama dhadhamin, qufac, neefsashada oo dhib ah, madax-xanuun, lallabbo, matag, iyo shuban.
Hadaad ahaan lahayd laga yaabo inuu la kulmo COVID-19, waa in aad tijaabiso shan maalmood ka dib soo-gaadhista suurtogalka ah, xitaa haddii aadan lahayn calaamado. Haddii calaamaduhu soo baxaan, waa inaad isla markiiba tijaabisaa, ka dibna ku celisaa baaritaanka dhawr maalmood gudahood haddii ay xun tahay. Xusuusnow, imtixaannada guriga-guriga maaha kuwo sax ah goor hore.
Waa inaad sidoo kale tijaabisaa naftaada ka hor inta aan la isu keenin kuwa leh khatarta oo kordhay dhibaatooyinka laga bilaabo COVID-19 (waayeel, difaac-difaac, ama dadka aan la tallaalin). Haddii aad leedahay calaamado muujin kara COVID-19, waa inaadan halis u gelin inaad dadka kale soo bandhigto, xitaa haddii lagaa baarayo.
Maxaan sameeyaa haddii aan tijaabiyo togan?
Haddii aad tijaabiso togan:
1. La xidhiidh bixiyaha xanaanada caafimaadkaaga talo
2. U sheeg xiriir kasta oo aad la lahayd dhawrka maalmood ka hor inta aan la helin calaamado togan ama ay soo baxayaan. Hadii aad iska diiwaan galiso WA Ogaysii, waxaad isticmaali kartaa app-ka si aad si qarsoodi ah ugu digto isticmaalayaasha abka kale ee suurtogalka ah.
3. Haddii aad tijaabiso togan oo aad samayso ma ay yeeshaan astaamo waa in aad go'doomiso ilaa ugu yaraan 5 maalmood ay ka soo wareegaan taariikhda baadhista COVID-19 ee ugu horeysey.
Haddii aad tijaabiso togan iyo adiga do waxay leeyihiin astaamo, waa in aad go'doomiso Ilaa ay qandhadaadu ka baxdo iyada oo aan la helin dawooyinka qandhada yareeya ugu yaraan 24 saacadood, calaamadahaagu way soo hagaagayaan, ugu yaraan shan maalmood ayaa ka soo wareegay markii calaamadahaagu bilaabmay.
Noocyada baaritaanka COVID-19furayaa faylka PDF by Waaxda Caafimaadka ee WA
Is-tijaabin: Waxa aad u baahan tahay inaad ogaato by Xarumaha Xakamaynta iyo Kahortagga Cudurrada (CDC)
Hagaha Tijaabada COVID by Raadiyaha Dadweynaha Qaranka
Baaritaanka COVID-19 caymiska xubnaha CHPW/CHNW
« 5 Su'aalood oo leh Xidhiidhka Qabaa'ilka ee CHPW
Daryeelka Ka Hortagga ah - Waa maxay sababta aan u daryeelo? »
Tilmaamaha Badbaadada ee Amniga Washington
Cudurada Kuleylka La Xiriira
U isticmaal shaashadda qorraxda si aad u ilaaliso maqaarkaaga
Ninka iyo Daawada
Naga Raadi Warbaahinta Bulshada